सेरोफेरो : May 2016
बूढीगण्डकीमा कुदृष्टि !
प्रकाश गौडेल/भवसागर घिमिरे,
जेष्ठ ७, २०७३- वैशाख दोस्रो साता भारतका अधिकांश हिस्सामा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस नाघेपछि करिब ३३ करोड मानिस खडेरीको मारमा परेको खबर विश्वभर फैलियो । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीका अनुसार पूर्वी राज्य उडिसामा विद्यालयहरू बन्द गरिएका थिए ।
चर्को खडेरीकै कारण हाल भइरहेको इन्डियन क्रिकेट प्रिमियर लिगका फाइनलसमेत गरी १३ खेल महाराष्ट्रबाट अन्तै सार्न मुम्बई उच्च न्यायालयले फैसला गर्‍यो । उत्तर प्रदेशको काकोरी जिल्लाको एक गाउँभरिका ट्युबवेलहरू सुक्दा बालीनाली विनाश भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रसारण गरे ।
उता प्रचण्ड गर्मीको तातो तावामा भारत पाकिरहेको थियो । यता गोरखाको आरुघाट बजारलाई पनि सँगै बगेको बूढीगण्डकीको चिसो पानीले चिस्याउनसकेको थिएन । यही नदीमा प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाको बहसले वायुमण्डलीय तापक्रमलाई मात खुवाउँदै थियो ।
आरुघाटले सायदै बुझेको थियो, पुरै गाउँ उठाएर बनाउन लागिएको यो आयोजनाबाट आफूलाई चिस्याउन भारत पर्खिरहेको छ । बूढीगण्डकीको बिजुली कथाभित्र लुकेको पानी राजनीति के छ त ? हामी यसैको चर्चा गर्दैछौं ।
‘समाज सेवाले मीठो निद्रा”
बेलायती सैन्य सेवामा लगभग साढे चार दशक बिताएका ७२ वर्षे मेजर चन्द्रबहादुर पुन सन् २००१ मा नेपाल फर्के । विश्वका ठूलाठूला युद्ध साम्य पारेर थकाइ मार्न उनी देश फर्कंदा नेपाल भने ‘जनयुद्ध’मा फसिसकेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको भु्रंगोका बीच भएको
दरबार हत्याकाण्डले देशको राजनीतिक माहोलमा यति धेरै नैराश्य मिसाइदिएको थियो कि देश फर्कनेभन्दा बिदेसिनेको लर्को बढ्दो थियो । लामो समयको विदेश बसाइ । त्यसमाथि विश्वका विभिन्न देशमा सैनिक सेवा गर्दाको अनुभव । बेलायती सैनिकमा गोर्खालीले पाउने माथिल्लो स्तरको पद, मेजरसम्म पुगेका पुन जीवनको पछिल्लो अध्याय विदेशमै विलासी जीवन बिताउन पनि सक्थे । तर उनी नेपाल फर्के अनि यहाँ सामाजिक सेवामा रमाउन थाले । पोखरामा सामाजिक क्षेत्रमा ऐले बिस्तारै चम्कन थालेका मेजर पुनलाई के कुराले बेलायतबाट नेपालतर्फ फर्कायो त ? जिज्ञासा मेट्न म उनलाई उनकै घरमा भेट्न पुगेँ ।